Fomba fitondrana ny zanaky ny Kristiana | Madagascar features website
Tuesday, August 14, 2012 - 06:02
Ny olona rehetra dia samy maniry taranaka vanona sy tafavoaka eo amin' ny fiainany.
Ary tsy faniriana fotsiny izany fa tena adidy mihitsy, ary anenenana sy ananan-tsiny tokoa raha ohatra ka tsy tomombana.
Ambonin' izany rehetra izany, dia voalaza ao amin' ny Soratra Masina rahateo koa io (Ohabolana:22:6).
Mikasika izany indrindra ny resaka hatao eto, dia fanomezana toro-lalana ho an'ny raiamandreny, zoky, mpanampy, ary izay mpanabe zaza rehetra, ny amin' ny fomba tokony ho fanabeazana ny zaza sy ny tanora, mba haha-olom-banona azy rehefa lehibe.
Raha atao bango tokana, ny fahadisoan' ny raiamandreny maro eo amin' ny fitaizana ankizy, dia vokatry ny fiheverana ny zaza ho olon-dehibe, fa ny vatany fotsiny no mbola kely.
Manana toetra manokana ny zaza, izany dia mila fantarina tsara, alohan' ny hanomezanao lesona azy, na koa hanitsianao ny fitondran-tenany.
Misy fizarana maromaro izy ity, ka ny voalohany amin' izany dia ny fandinihana ny fomba nitaizan' i Maria sy Josefa an' i Jesosy fony Zaza : http://gascar.me/ankohonana-nitaizana-an-i-Jesosy-Zaza
Fizarana faharoa : Tantara hakana lesona : http://gascar.me/tantara-telo-hakana-lesona-fitaizana-zaza
Raha te-hahazo vokatra tsara eo amin' ny fitaizana ny zaza ho lasa olom-banona any aoriana, dia tena mila manao ezaka be sy fandavan-tena (izay ilay hoe mila manokana fotoana ampy (quality time)). Ny zavatra rehetra horesahina eto dia miankina amin' io, hoe : mila manokana fotoana ho amin' ny fitaizana ny zaza fotsiny.
Koa isan' andro dia tokony haverimberin' ny mpitaiza sy mpanabe hatrany ireto fanontaniana roa ireto:
-Fanontaniana 1 : Nisy ve ilay fotoana ampy (quality time), natokana ho an' ilay zaza androany
-Fanontaniana 2: Nanao ahoana ny nampiasana ilay fotoana ampy androany?
Rehefa izany , dia ireto avy amin' izay ny zavatra hatao ao anatin' ilay fotoana ampy :
- Dingana 1: Fanankinana amin' Andriamanitra (vavaka)
- Dingana 2: Fanomezana lesona (fampianarana)
- Dingana 3: Fanomezana ohatra (modely harahina)
- Dingana 4: Fanitsiana izay nibirioka (fanasaziana)
- Dingana 5: Faharetana (constance, persévérence)